A ngwa nju oyi Way inwale Brain Surgery Ọrịa - News Ọchịchị
A ọhụrụ usoro nke na-eleru neurosurgical ọrịa na-enye ọhụrụ ghọta otú ụbụrụ na-emepụta okwu
Isiokwu a na-akpọ “A ngwa nju oyi ụzọ inwale ịwa ahụ n'ụbụrụ ọrịa” e dere site knife Costandi, n'ihi na theguardian.com on Friday 26 February 2016 09.30 UTC
Researchers na U.S. mepụtara ọhụrụ na mma na Usoro maka nkewa na-echebe ụbụrụ na-adịghị ọrịa banyere na-ata neurosurgery - by obi jụrụ obere, metụtara nanị akụkụ ụfọdụ ụbụrụ na mpaghara na-anọ nwa oge ịkwụsịtụ ha workings ma see map nke ebe chọrọ maka okwu guzobere na usoro iheomume nke okwu. Ha na-akọwa ha usoro, na-akọwa otú ndị ji ya na ichoputa na ụbụrụ na-akpata mmepụta nke okwu asụsụ, na a ọhụrụ ọmụmụ dị nnọọ bipụtara na magazin Neuron.
Akụkọ banyere ndị na-anọgide na- -amụ anya n'oge ịwa ahụ n'ụbụrụ apụta mgbe nile na ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Na 2008, ọmụmaatụ, multiple ozi ọma outlets kọrọ na kpara Bluegrass musician Eddie Adcock ọ bụghị naanị nọgidere maara, mana ọzọkwa egwuri ya banjo, n'oge a atọ na ọkara na ime ihe na-emeso a aka tremor. Na ikpeazụ December, e nwere ndị yiri akụkọ banyere Spanish Jazz musician Carlos Aguilera, onye egwuri ya saxophone ofụri a 12-hour iji wepụ otu akpụ ụbụrụ.
Related: Sudoku na-akpata akwụkwụ ọdịdọ
Dị otú ahụ na usoro na-emekarị kọwara dị ka "-atụ n'anya,"" Revolutionary,"na, mgbe ụfọdụ, "Ọrụ ebube." N'eziokwu, dọkịta na-awa e arụ ọrụ na ụbụrụ nke maara ọrịa nke fọrọ nke nta otu narị afọ: The e mepụtara usoro na 1920s site na-asụ ụzọ Canadian neurosurgeon Wilder Penfield, dị ka ụzọ nke n'ịchọpụta ọrịa ntutu ịdapụsị ụbụrụ anụ ahụ na-eme ka akwụkwụ ọdịdọ.
Penfield eji electrodes na-akpali elu nke ya ọrịa ụbụrụ, na ụma mee ka ha na-amụ anya n'oge ịwa ahụ ka ha nwee ike na-akọ mmetụta nke mmalite azụ ya. Site-akpali akpali nke ebe gburugburu ndiiche anụ ahụ, ọ mata anụ ahụ na-eme ka ahụ ka ihe ọdịdọ mgbe na-N'ikpebi ihe nke bi gburugburu ebe a dị mkpa n'ihi na mkpa ọrụ dị ka okwu na ije. Ụzọ a, o nwere ike iwepụ ọrịa ntutu ịdapụsị anụ ahụ enweghị na-eme ihe ọ bụla nnochianya mmebi.
Penfield si usoro nke cortical mmalite ka na-eji ọtụtụ ebe taa ma, dịtụ eleezie, nwere ike onwe ya ịkpalite akwụkwụ ọdịdọ. The ọhụrụ usoro-eburu dịghị otú ahụ n'ihe ize ndụ. mepụtara Michael Long nke New York University si Langone Medical Center na ndị òtù ya, ọ na-ewulite tupu usoro na-eji jụrụ eme Nchoputa Banyere na-amụ ụbụrụ circuitry-ahụ maka song mmepụta ke zebra finches.
Long na ibe ya ji mee ihe a yiri jụrụ ngwaọrụ on 16 ọrịa na-inyocha n'ihi neurosurgical arụmọrụ na-emeso ha na-eguzogide ọgwụ Akwụkwụ na-adọ. Na ọrịa n'okpuru anestetiiki, na-eme nnyocha na-eji ngwaọrụ ajụkwa 42 pụrụ iche ụbụrụ na mpaghara, niile nke ndị nke e mbụ ịkpata ya na okwu mmepụta, site banyere 10CelsiusC ọ bụla. Ka ọ dịgodị, na ọrịa a gwara ekwughachi ụbọchị nke izu, ma ọ bụ a dị mfe eriri onuogugu, nke mere na okwu ọnụ ha ọrụ nwere ike na-enyocha mgbe ọ bụla n'ógbè e mma.
Jụrụ interrupts cellular ọrụ, na ụfọdụ, na-eme nchọpụta chọpụtara na ọ emebikwa ndị ọrịa ike ikwu okwu, slowing na blurring ha okwu. Nke a pụrụ isi kwuo ahụ adịteghị, Otú ọ dị - ụbụrụ dịghachi otú o kwesịrị ozugbo obi jụrụ ngwaọrụ E wepụrụ ụbụrụ, na ihe nile 16 ọrịa ekemende napụtara n'aka ha arụmọrụ enweghị ihe ọ bụla undesired mmetụta ma ọ bụ ndị ọzọ nsogbu.
Related: Dissolvable wireless sensọ monitor mmerụ ahụ n'ụbụrụ
The results gosi na mbụ Nchoputa Nke ụbụrụ ebe aka na okwu mmepụta na-ukwuu n'ime bizi na-ekpe emisfee, na ha na-enye ọhụrụ ghọtakwuo otú ụbụrụ na-emepụta okwu. kpọmkwem, obi jụrụ otu akụkụ nke ekpe moto cortex gbanwere àgwà nke ọrịa okwu, ebe obi jụrụ nke Broca si Area na-ekpe temporal n'ọnụ ọnụ gbanwere usoro iheomume nke okwu ọnụ ha.
Ndị a na-arụpụta na-egosi na moto cortex-eduzi muscle mmegharị ke egbugbere ọnụ na asụsụ ndị achọrọ maka articulating okwu, ebe Broca si Area dị mkpa n'ihi na ekpede a mmegharị ha kwesịrị ekwesị usoro.
"Nke a na-amụ na-egosi na jụrụ bụ a enem irè n'aka-echebe mkpa ụbụrụ emmepe n'oge neurosurgery," -ekwu Long. "[ọ] na-anọchi anya[s] a isi tupu ke nghọta nke ọrụ egwuri site ebe nke ụbụrụ na-eme ka anyị na-etolite okwu. "
Long, M. A., et al. (2016). Ọtọ Segregation nke Cortical Regions-apụtaghị ìhè Speech họtara oge na Articulation. Neuron 89: 1-7. DOI: 10.1016/j.neuron.2016.01.032 [nkịtị]
24232	4 Nkeji edemede, Blogposts, Medicine, knife Costandi, Neurophilosophy, Neuroscience, Science, Science blog netwọk
← Nke A Ọ Bụ The Future of Ọrụ? The Best Space selfies [RANKER] →